MB 2015 Aogositra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2015 Aog
Vao haingana aho no nahita vidéo maneso ny dokam-barotra amin'ny fahitalavitra. Tamin'ity tranga ity dia momba ny CD fanompoam-pivavahana kristiana noforonina mitondra ny lohateny hoe "Ny momba ahy rehetra". Ny CD dia nahitana ireo hira: “Tompo ô, manandratra ny anarako ho any amin’ny avo aho”, “Manandratra Ahy” ary “Tsy misy tahaka Ahy”. (Tsy misy toa ahy). Hafahafa? Eny, nefa mampiseho ny fahamarinana mampalahelo izany. Isika olombelona dia mirona hanompo ny tenantsika fa tsy Andriamanitra. Araka ny nolazaiko farany, io fironana io dia mahatonga ny fiforonantsika ara-panahy ho fohy, izay mifototra amin’ny fitokiana amin’ny tenantsika fa tsy amin’i Jesosy, “ilay niandoha sy namarana ny finoana” (Hebreo 1.2,2 Lotera).
Amin'ny alàlan'ny lohahevitra toy ny "Fandresena ny ota", "Fanampiana ny malemy" na "fizarana ny filazantsara" dia manampy ny olona tsy nahy amin'ny fomba tsy araka ny tokony ho izy momba ny fiainana Kristiana ny mpitory. Ireo lohahevitra ireo dia mety hanampy, saingy tsy rehefa mifantoka amin'ny tenany manokana ny olona fa tsy an'i Jesosy - iza izy, inona no nataony sy nataony ho antsika. Tena ilaina ny manampy ny olona hatoky tanteraka an'i Jesosy, ho an'ny mahaizy azy, amin'ny fiantsoany ary ny tanjon'izy ireo farany. Ny masony mifantoka amin'i Jesosy dia hahita izay tokony hatao mba hanompoana an'Andriamanitra sy ny olombelona fa tsy amin'ny ezaka ataon'izy ireo, fa amin'ny fahasoavana handray anjara amin'ilay nataon'i Jesosy, mifanaraka amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina ary fitiavana feno lavorary ny olona.
Mamelà ahy hampiseho izany amin’ny alalan’ny resadresaka nifanaovana tamin’ireo Kristianina nanolo-tena roa. Ny resaka nifanaovany tamin’ny lehilahy iray dia ny ady ataony amin’ny fanomezana. Nandritra ny fotoana ela izy no niezaka nanome ny fiangonana mihoatra noho izay nokasainy teti-bola, mifototra amin’ny hevi-diso hoe raha te ho malala-tanana dia tsy maintsy maharary ny fanomezana. Saingy na inona na inona nomeny (sy ny alahelony toy inona) dia mbola nahatsapa ho meloka ihany izy fa afaka manome bebe kokoa. Indray andro, raha nanoratra seky ho an’ny fanatitra isan-kerinandro izy, dia niova ny fomba fijeriny ny fanomezana, feno fankasitrahana. Tsikariny ny fomba nifantohany tamin’ny dikan’ny fahalalahan-tanany ho an’ny hafa, fa tsy ny fiantraikan’izany eo amin’ny tenany. Tamin’ny fotoana nisehoan’izany fiovana teo amin’ny fisainany izany, ka tsy nahatsiaro tena ho meloka intsony, dia nivadika ho fifaliana ny fahatsapany. Sambany izy no nahatakatra andinin-teny iray izay voatonona matetika amin’ny filazana an’ireo niharam-boina hoe: “Koa ny tsirairay àry dia tokony hanapa-kevitra ho an’ny tenany hoe ohatrinona no tiany homena, an-tsitrapo fa tsy noho ny ataon’ny hafa. Fa izay manome amin-kafaliana sy an-tsitrapo no tian’Andriamanitra”. (2. 9 Korintiana 7 ho an’ny rehetra). Tsapany fa tsy latsa-danja ny fitiavan’Andriamanitra azy fony izy tsy mpanome amim-pifaliana, fa izao Andriamanitra izao dia mahita sy tia azy amin’ny maha-mpanome mifaly azy.
Ny fifanakalozan-kevitra faharoa dia resaka roa nifanaovana tamin'ny vehivavy iray momba ny fiainany amin'ny fivavahana. Ny resaka voalohany dia ny fametrahana ny fiambenana hivavaka mba hahazoana antoka fa nivavaka nandritra ny 30 minitra fara-fahakeliny izy. Nohamafisiny fa ho vitany avokoa ny fangatahana vavaka rehetra mandritra io fotoana io, saingy taitra izy rehefa nijery ny famantaranandro ary hitany fa tsy ampy 10 minitra akory no lasa. Nivavaka bebe kokoa àry izy. Saingy isaky ny mijery ny famantaranandro izy, dia vao mainka nitombo ny fahatsapana ho meloka sy tsy ampy fahaizana. Ho vazivazy, dia nanamarika aho fa toa "mivavaka amin'ny famantaranandro" izy. Tamin'ny tafatafa faharoa nataonay dia nilaza tamiko izy fa nanova ny fomba fiasany amin'ny vavaka ny teniko (izany no mahatonga an'Andriamanitra hahazo ny voninahitra fa tsy izaho). Toa nahatonga ny eritreriny nandeha ny fanehoan-kevitro, ary rehefa nivavaka izy, dia nanomboka niresaka tamin’Andriamanitra fotsiny izy fa tsy nanahy ny amin’ny halavany nivavaka. Tao anatin’ny fotoana fohy, dia nahatsapa izy fa nifandray kokoa tamin’Andriamanitra noho ny teo aloha.
Mifantoka amin'ny zava-bitantsika, ny fiainana kristiana (anisan'izany ny fanabeazana ara-panahy, ny maha-mpianatra sy ny iraka) dia tsy hoe "tsy maintsy ataonao". Fa kosa, dia ny fandraisana anjara amin’ny alalan’ny fahasoavana amin’izay ataon’i Jesosy amintsika, amin’ny alalantsika, ary amin’ny manodidina antsika. Ny fifantohana amin'ny ezaka ataon'ny tena dia mitarika ho amin'ny fanamarinan-tena. Ny fanamarinan-tena izay mazàna mampitaha na manameloka ny hafa ary mamitaka ny fanatsoahan-kevitra fa nanao zavatra mendrika ny fitiavan’Andriamanitra isika. Ny fahamarinan’ny filazantsara anefa dia ny fitiavan’Andriamanitra ny olon-drehetra tahaka ny vitan’ilay Andriamanitra lehibe tsy manam-petra. Midika izany fa tia ny hafa tahaka ny fitiavany antsika izy. Ny fahasoavan’Andriamanitra dia manaisotra izay toe-tsaina “isika manohitra azy” izay manandra-tena ho marina sy manameloka ny hafa ho tsy mendrika.
Mety hanohitra anefa ny sasany, “fa ahoana ny amin’ny olona manao fahotana lehibe? Marina tokoa fa tsy tia azy ireo tahaka ny fitiavany ny mpino marina Andriamanitra. Mba hamaliana izany fanoherana izany, dia ireo mahery fo amin’ny finoana ao amin’ny Hebreo ihany no ilaintsika 11,1-40 ny mijery. Tsy olona lavorary izy ireo ary maro tamin'izy ireo no niaina nandritra ny fotoan'ny tsy fahombiazana goavana. Ny Baiboly dia manana tantara bebe kokoa momba ny olona izay novonjen'Andriamanitra tamin'ny tsy fahombiazana noho ny olona niaina tamim-pahamarinana. Indraindray isika dia mandika vilana ny Baiboly hoe ny voavotra no nanao ny asa fa tsy ny Mpamonjy! Raha tsy takatsika fa ny fiainantsika dia ampiasaina amin’ny fifehezana amim-pahamendrehana, fa tsy amin’ny ezaka ataontsika manokana, dia diso hevitra isika fa ny fijoroantsika eo anatrehan’Andriamanitra dia mifototra amin’ny zava-bitantsika. Eugene Peterson dia miresaka izany fahadisoana izany ao amin'ny bokiny maha-mpianatra mahasoa, A Long Obedience in the same Direction.
Ny tena zava-dehibe indrindra ho an'ny Kristiana dia ny fanoloran-tena manokana, tsy miova, maharitra, izay apetrak'Andriamanitra ao amintsika. Ny fikirizana dia tsy vokatry ny fahatapahan-kevantsika, fa vokatry ny fahatokian'Andriamanitra. Tsy misy isika satria manam-pahefana miavaka, fa Andriamanitra dia marina. Ny maha-mpianatra kristiana dia dingana iray izay mampitombo ny fahafantarantsika ny fahamarinan’Andriamanitra sy ny fahafantarantsika ny hitsarantsika manokana. Tsy ekentsika ny dikany eo amin'ny fiainana amin'ny alàlan'ny fandalinana ny toetrantsika, ny antony manosika ary ny fitsipiky ny fitondran-tena, fa amin'ny finoana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fikasany. Amin'ny fanehoana ny fahatokisan'Andriamanitra fa tsy amin'ny fikasana ny fisondrotana sy ny fianjanan'ny tsindrimandrintsika.
Andriamanitra, izay mahatoky antsika foana, dia tsy manameloka antsika, raha tsy mahatoky azy. Eny, ny fahotantsika aza mampalahelo azy satria nandratra antsika sy ny hafa. Saingy ny fahotantsika dia tsy mamaritra hoe firy no tian'Andriamanitra fatratra. Lavorary Andriamanitra tokana, fitiavana lavorary izy. Tsy misy farafara na haben'ny fitiavany ny olona tsirairay. Satria tia antsika Andriamanitra, dia manome antsika ny Teniny sy ny fanahiny mba hahafahantsika mahafantatra mazava ny fahotantsika, hanaiky izany amin'Andriamanitra sy avy eo hibebaka. Midika izany fa miala amin'ny ota ary miverina amin'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Amin'ny farany, ny ota rehetra dia fandavana ny fahasoavana. Diso hevitra ny olona fa mahavita manafaka ny ota izy ireo. Marina fa na iza na iza mandà ny fitiavan-tena, dia mibebaka sy miaiky ny ota manao izany, satria nanaiky ny asa feno fahamendrehana sy fiovan'Andriamanitra. Amin'ny fahasoavany dia eken'Andriamanitra daholo ny olona na aiza na aiza misy azy fa kosa mitohy avy any.
Raha mametraka an’i Jesosy ho ivo isika fa tsy ny tenantsika, dia mijery ny tenantsika sy ny hafa amin’ny fomba fijerin’i Jesosy antsika ho zanak’Andriamanitra isika. Tafiditra ao anatin’izany ireo maro izay tsy mbola mahafantatra ny Rainy any an-danitra. Satria isika manana fiainana ankasitrahan’Andriamanitra miaraka amin’i Jesosy, dia manasa antsika Izy ary mampiomana antsika handray anjara amin’izay ataony, mba hanatratrarana amim-pitiavana izay tsy mahafantatra Azy. Rehefa mandray anjara miaraka amin’i Jesoa amin’io dingan’ny fampihavanana io isika dia mahita mazava kokoa ny zavatra ataon’Andriamanitra mba hanentanana ireo zanany malalany hitodika Aminy amin’ny fibebahana, mba hanampiana azy ireo hametraka tanteraka ny fiainany eo amin’ny fiahiany. Koa satria miara-miombona amin’i Jesoa amin’io asa fampihavanana io isika, dia mianatra mazava kokoa ny tian’i Paoly holazaina rehefa nilaza izy fa ny lalàna dia manameloka fa ny fahasoavan’Andriamanitra no mamelona (jereo ny Asan’ny Apostoly 1 Kor.3,39 ary Romana 5,17-20). Noho izany dia zava-dehibe ifotony ny fahatakarana fa ny fanompoantsika rehetra, anisan’izany ny fampianarana ataontsika momba ny fiainana kristiana, miaraka amin’i Jesosy dia vita amin’ny herin’ny Fanahy Masina, eo ambanin’ny eloben’ny fahasoavan’Andriamanitra.
Mifantoka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra hatrany aho.